यसरी रातो नम्बर बाट आएको फोन उठाउदा धादिंग र मकवानपुरमा मान्छे मरेको हल्लाले देशभर हङ्गामा, के हो बास्तबिकता? – ZoomNP
यसरी रातो नम्बर बाट आएको फोन उठाउदा धादिंग र मकवानपुरमा मान्छे मरेको हल्लाले देशभर हङ्गामा, के हो बास्तबिकता? प्रकाशित मिति: बिहिवार, पौष १४, २०७३ समय - १२:३२:५९ काठमाडौं, १४ पुस । कवि भूपी शेरचनले भनेका थिए, ‘नेपाल हल्लैहल्लाको देश हो ।’ सायद ठीकै भनेका थिए उनले । नेपाल हल्लैहल्लाको भरमा बेलाबखत तरङ्गित हुने गरेको छ । यस्तै एउटा हल्लाको पछिल्लो संस्करणले केही दिनयता देशभर त्रास फैलिरहेको छ ।